Kuyimele kahle imbokodo kwi-Safa | News24
Kuyimele kahle imbokodo kwi-Safa
UMHLANGANO we-South African Football Association (Safa) oyisipesheli ngempelasonto edlule utshengise izinkomba eziqinile zokuthi kungenzeka ukuphathwa kwebhola kube nokushintsha okusha.
Ngesikathi zonke izicukuthwane nezikhulu eziphezulu ze-Safa zihlangene kulenqunquthela eyisipesheli (special congress) nebekubukeka iwumhlahlandlela kweyangonyaka ozayo nalapho kobe kukhethwa izikhundla, kuvele ngokusobala ukuthi lenhlangano kazwelonke eyengamele ibhola laseMzansi isikulungele ukunika abesifazane ithuba lokuphatha.
Ngesikhathi kungunuzwa futhi kucutshungulwa imininingwane eminingi mayelana nokukhethwa kwezikhundla kucace bha ukuthi yiningi imbokodo (abesifazane phela) abangathola izikhundla eziphakeme, ikakhulukazi zokuba isekela lika Mongameli we-Safa (vice-presidents).
Kuvele kwasobala nokuthi u-Safa uyakuthakasela noma-ke uzokhetha amasekela kaMongameli amane (four vice-presidents) nokuyoletha ushintsho olukhulu nokwenza umlando omusha eMzansi.
Amanye amagama avelayo ezinzwakazi ezikade zalibamba igeja lishisa ebholeni laseMzansi afana no Anastasia Tsichlas, Ria Ledwaba kanye noNomsa Mahlangu nababukeka befanelwe noma bangakhethelwa kulezikhundla.
Isikhulu esikhulu se-Safa nesiyi-CEO uDennis Mumble uthe zikhona izinto ezimbalwa eziwumhlahlandlela nezinqumo ezamukelwe yilenhlangano ngesikhathi kunomhlangano oyisiphesheli.
“Ezinye zezinto ezizoba wushintsho ezamekeliwe noma zavunywa wukuthi kukhethwe amasekela kaMongameli amane nekufanelwe isihlalo esisodwa sivulele owesifazane kanti esinye nangokujwaye siyekelwe uSihlalo we-PSL. Lezike ezinye ezimbili seziyokhethwa yikomiti eliphezulu likazwelonke (National Executive Committee) le-Safa,” kusho uMumble.
Lezizathu noma lomhlahlandlela uthathwa njengezinkomba ezethembisayo zokuthuthukisa nokubhekelela imbokodo.
Njengamanje ekomitini leSafa kunabesimame abane kodwa bathathu kuphela abavunyelwa usomqulu noma umthetho wokuthi bangathatha ezinye izikhundla ezithe xaxa.
Osabambe kwiPSL njengeCEO nothathwa njengeNkosazane enamandla yaKwaZulu-Natal uMato Madlala yena akakwazi noma umthetho awumvumeli ukuthatha esinye isikhundla ku-Safa futhi ubengakhethwanga kwabesifazane ababhekeke ukuthi mhlawumbe baphathe kulenhlangano.
Ngendlela izinto ezime ngazo okwamanje kuyacacisa ukuthi abasethubeni lokuthi baqokelwe lesikhundla esibalulekile o-Anastasia Tsichlas, Ria Ledwaba kanye Nomsa Mahlangu. Kuzokhumbuleka ukuthi okwamanje u-Safa unamasekela kaMongameli amathathu, nokunguSihlalo we-PSL Irvin Khoza, u-Elvis Shishana kanye no Lucas Nhlapho.